Shiinaha 5 lakab oo A5 Goynta Mat, 661A5, Is-bogsiinta Goynta gogosha Soosaarka iyo Warshad | Allwin
5 lakab A5 Goynta Mat, 661A5, Is bogsiinta gogosha gogosha
Sbogsashada A5 goynta warshadda derin toos ah
Gogosha goynta waa mid ka mid ah aaladaha ay tahay in ciyaartoyga tusaalaha warqaddu ay qalabeeyaan;
BAADHITAANKA IS-CAAFIMAADKA: Awoodda is-bogsiinta ee la taaban karo waxay ka dhigeysaa jeexitaanku gebi ahaanba baabi'iyo goynta soo noqnoqonaya saameyn kuma yeelaneyso, dayactirka dusha sare iyo fidinta nolosha suufka iyo jarista daab.
Inch & cm, Double-dhinac ： Imperial iyo Metric haga labadaba waa qeexitaan sare oo la daabacay, si loo hubiyo jaritaan toosan oo sax ah iyo shaqo tayo sare leh mar kasta.
TAYO BADAN: Aan milicsiga lahayn, siibasho la'aan, oo leh adkeysi aad u saraysa oo salka leh. Dhumucda 3mm waxay ka dhigeysaa mid qaro weyn oo adkeysi leh. Dabacsanaan xoog leh iyo adkaysi wanaagsan, si markaas loogu qaloocdo marka la doono.
QAADASHO BADAN: Matkaan goynta ayaa Ku haboon dhamaan noocyada qorista iyo rinjiyeynta, suufka gacanta, warqad farshaxan gacmeed, goynta filimada xun, Goynta waraaqaha, iwm. Sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sida jiirka jiirka, waana lagama maarmaan ardayda, qoysaska iyo xafiisyada .
Waxyaabo Tayo Sare Leh Oo Aysan Dhicin: Waxaad ku raaxeysan kartaa adeegsiga derin gogol khafiif ah oo iska caabbinaya qallooca. Waxay u haysaa hadiyad weyn macallimiinta, farshaxanleyaasha iyo musqulaha xiisaha badan.
Lambarka Moodalka Shayga 661A5
Culayska Shayga 0.16kg halkii gabal
Cabirka Wax soo saarka 8.7 x 5.9 x 0.12 inji / 22 x 15 x 0.3 cm
Cabbirka (Spec.) A5
Nooca Maaddada PCV
Dammaanad & Taageero;
Warranty Product: Asal ahaan ma jiri doonto dhibaato ka dib iibka, waxaan si firfircoon ula macaamilaan wax kasta oo ka dib-iibka dhibaatooyinka iyo Taageerada ka dib iibka ah ee alaabta 1 sano.
Hore: 5 lakab A4 Goynta Mat, 661A4, Is bogsiinta gogosha gogosha
Xiga: 3 lakab A1 Gogosha Gogosha, 883A1, Is-bogsiinta gogosha gogosha